Naanị mgbe obi dị unu ụtọ na ịṅụrị ọṅụ na ọ nwetara a ọhụrụ ekwentị maka onwe gị, ị na-ahụ na-ebufe kọntaktị na ndị ọzọ na data si gị ochie Lumia ngwaọrụ gị ọhụrụ ekwentị ọsọ na android adịghị mfe. Ọfọn, echegbula, dị ka e bụ ụzọ nke na-ezere a nsogbu.
Nyefee kọntaktị site na a Lumia na Android bụ nnọọ ọtụtụ usoro. Ọzọkwa, ọ na-achọ onye ọrụ nwere ụfọdụ oru knowhow. Usoro comprises nke nzọụkwụ abụọ. Na nzọụkwụ mbụ, kọntaktị si Lumia ngwaọrụ nwere na-exported na Outlook akaụntụ na ebudatara n'ụdị a .csv faịlụ. Mgbe ahụ na nzọụkwụ nke abụọ, nke a .csv faịlụ kwesịrị ka a uploaded Google kọntaktị. Ozugbo kọntaktị e echekwara na Gmail akaụntụ, onye ọrụ kwesịrị ka banye na ya Android ngwaọrụ site na iji otu Google akaụntụ nwere ya niile kọntaktị synced ya Android ngwaọrụ.
N'ebe a, anyị ga-atụle abụọ nnọọ mfe ụzọ nke na-ebufe kọntaktị site na Lumia ka Android ke ibuotikọ emi.
Nyefee na Ndi ana-akpo iji Wondershare MobileTrans
Nyefee na Ndi ana-akpo iji Outlook na MobileGo
Nzọụkwụ nyefee kọntaktị site na Lumia ka Android
Nzọụkwụ 1: On Malite ihuenyo gị Lumia ekwentị, swipe we si n'elu na enweta All Settings ndabere. Banye na akaụntụ Microsoft gị wee họrọ kọntaktị na ndabere. Nọmalị ekwentị gị ga-akpaghị aka ndabere kọntaktị gị gị microsft akaụntụ.
Nzọụkwụ 2: Open Wondershare Mobiletrans, họrọ Weghachi si ndabere mode na interface, wee họrọ OneDrive si nhọrọ.
Nzọụkwụ 3: Nbanye na gị OneDrive akaụntụ na ka usoro ihe omume ike iṅomi nkwado ndabere na mpaghara faịlụ. Usoro a pụrụ sekọnd ole na ole. Jikọọ gị iPhone na kọmputa, mgbe ahụ, usoro ihe omume ga-amata na ọ na-akpaghị aka.
Nzọụkwụ 4: Họrọ Ndi ana-akpo na pịa Malite Nyefee. The kọntaktị ga-agafere nke Android ekwentị na sekọnd ole na ole.
Iji nyefee kọntaktị na-eji ihe Outlook ajụjụ ị ga-mkpa a otutu uche ike, oge na ume tinyere a PC, a Lumia ekwentị na-arụsi ọrụ ike njikọ Ịntanetị. Soro ntụziaka ndị a na-amalite:
Ka mmekọrịta kọntaktị site na gị Nokia Lumia gị Outlook akaụntụ, eso ndị a:
1. Gaa "Ndị mmadụ" ngwa na windo ekwentị, pịgharịa gaa na ala iji chọta "..." wee na-aga "Ntọala."
2. Site na ihuenyo na-egosi, chọta "Accounts" ma họrọ "Tinye ihe Akaụntụ".
3. Site-esonụ na ihuenyo, na-aga "Microsoft Akaụntụ" na-abanye na gị Outlook akaụntụ paswọọdụ na banye.
4. All kọntaktị gị Lumia ga-synced na gị Outlook akaụntụ.
5. Iji nweta ndị a kọntaktsị na gị na laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa, na-aga ihe nchọgharị weebụ gị na ụdị https://login.live.com. Banye na iji akaụntụ Microsoft gị na aha njirimara na paswọọdụ.
6. Ozugbo i wee banye na, chọta "Ndị mmadụ" na akaụntụ gị.
7. The adreesị akwụkwọ ga-emeghe elu na ị ga-achọpụta na kọntaktị niile site na gị Lumia ga-ugbu a na akaụntụ Microsoft gị.
8. Gaa Manage Export ka Outlook.com na ọrụ ndị ọzọ. Ị ga-achọrọ ịbanye a ebe ebe na ị chọrọ ị ịzọpụta .csv faịlụ ị bụ nnọọ banyere ike. Tinye gị chọrọ ọnọdụ na see tinye isi na a .csv faịlụ ga-ebudatara na ọnọdụ.
Ugbu a iji mbubata Outlook kọntaktị gị Android ekwentị, gaba ka ndị a:
1. Open elu nchọgharị gị na pịnye ke www.gmail.com. Banye na Gmail eji gị email na paswọọdụ.
2. Gaa Gmail Ndi ana-akpo.
3. Site menu mmanya n'ụlọ n'elu ịchọta "More" (esote Tinye kọntaktị). Gaa More, si dobe ala menu na-emepe, họrọ "Import".
4. Pịa "Họrọ File" na ịchọta ndị .csv faịlụ na ị dị nnọọ azọpụta. Mgbe na-ahọpụta faịlụ, kụrụ "Open".
5. kọntaktị gị ga-ugbu a-azọpụta gị Gmail akaụntụ. Ugbu a, banye na gị gam akporo ngwaọrụ site na iji otu Gmail ajụjụ ị zọpụta ị kọntaktị na. The syncing nhọrọ na-ama nyeere mgbe ị banyere n'ime akaụntụ gị maka oge mbụ.
Mbubata kọntaktị site na Outlook ka ihe gam akporo ngwaọrụ enweghị etinye na ukwuu ntuziaka mgbalị,-eso nke a dị mfe usoro:
1. Download Wondershare MobileGo gị laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa. Chere maka echichi mezue na-agba ọsọ MobileGo.
2. Jikọọ gị Android ekwentị gị laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa site na eriri USB. MobileGo ga-egosipụta ya mgbe na-aghọta ya.
3. Site menu na ekpe, họrọ ana-akpo.
4. Go mbubata Bubata kọntaktị site na computer si Outlook 2003/2007/2010/2013. Họrọ "Import" na-eche maka usoro iji wuchaa na mgbe ahụ ikwụpu gị Android ngwaọrụ site na laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa.
Anyị ekewet a ndepụta nke kasị ewu ewu na Android ngwaọrụ a na-eji ke United States. Votu maka ngwaọrụ nke bụ ugbu a gị na ojiji na-enyere anyị aka ikpebi kasịnụ-eto eto.
1. Samsung Galaxy S6 (ma ọ bụ S6 Edge)
4. Samsung Galaxy Cheta 4
7. Huawei ọdọk Nwunye 7
10. HTC Ọchịchọ anya
Otú nyefee Ndi ana-akpo si Lumia ka Samsung
> Resource> Android> otú nyefee Ndi ana-akpo si Lumia ka Android